André Rakotondranaivo sy ny fanagasiana - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Vao tamin'ny sabotsy teo no nitsingerina ny faha 45 taonan'ny tolom-bahoaka 13 mey 1972 ka nampirodana ny fitondrana tamin'izany. Anisan'ny notakiana ny fiverenan'ny fiandrianam-pirenena amin'ny alalan'ny fahaleovantena "tena izy" ka nametrahana ny fanagasiana teo amin'ny ivon'ny fitakiana. Nohenoin'ny mpitondra vaovao ny hetahetan'ny mpitolona ka nirosoana ny politikan'ny fanagasiana ny fampianarana. Niteraka adihevitra tsy mbola vita hatramin'izao anefa ny fampiharana azy. Nitranga nihemotra toy ny lelon-jaza ny fanagasiana satria mbetika nofoanana, mbetika niverenana, arakaraka ny safidy politikan'ireo mpitondra nifandimby.
Maro ireo anarana tokony tsy hohadinoina amin'ny fanagasiana fa andeha hotsongaina manokana ry E.D. Andriamalala noho ilay bokiny "Ny fanagasiana" (1974) sy André Rakotondranaivo, loharano nipoiran'ny bokim-pampianarana maro tamin'ny teny malagasy, ary hatramin'ny niantombohan'ny fanagasiana mihitsy.
Namosaka ny heviny manokana tao amin'ny tranonkala Poetawebs (Oktobra 2015) i André Rakotondranaivo, mpampianatra sady poeta, tamin'ny alalan'ireo fanontaniana efatra napetrak’i Toetra Ràja.
Toetra Ràja. Azo ampahatsiahivina eto ve ny nahatonga anao hanoratra boky?
André Rakotondranaivo. - Tsoriko fa tena fitiavana ary adidiko amin'ny fireneko ny nahatonga ahy hanoratra boky, indrindra ho amin'ny fampianarana. Rehefa nitaky ny fanagasiana ny fampianarana eto Madagasikara mantsy ny Mpianatra, notarihin'ireo zokiny teny amin'ny Anjerimanontolo, tamin'ny taona 1972, dia neken'ny fitondram-panjakana tamin'izay ny maha-rariny izany ka dia notanterahina. Izao anefa no olana: ny Mpampianatra nilaza fa tsy nofanina hampianatra teny malagasy, ary marina tokoa izany. Ny boky hoenti-mampianatra koa tsy nisy rahateo. - Koa ny tenako izay nampianatra tany Antsirabe tamin'izay fotoana izay no anisan'ny voaantso ho aty Antananarivo hamolavola ny fandaharam-pianarana. "BEP-OTEP" na "Bureaux d'Etudes de Programme" no anarana nomena anay tao amin'ny Minisiteran'ny Fanabeazana tamin'ny taona 1973.
Na dia navesatra sy sarotra aza ny adidy, dia izaho no nanana fahasahiana hamoaka boky voalohany indrindra ho amin'ny fampianarana ny teny malagasy. Ataoko fa nisy taminareo no nampiasa ny boky natao hoe "Kajy Fototra" sy ny "Fiarahamonina" ary ny "Fahalalana Tsotsotra".
André Rakotondranaivo. Inona no atao hoe "mpikaroka ny fanagasiana" ? Moa tsy ny mpikambana ao amin'ny Fizarana "Haikanto sy Hailaza" amin'ny Akademia Malagasy" sy ny mpikambana amin'ny "Havatsa/UPEM" ve ? Ary ampiako koa ny Mpampianatra teny malagasy rehetra, na amin'ny Ambaratonga Faharoa, na amin'ny Ambaratonga Ambony, tsy mpikarama fa mpankafy ny Tenindrazana malagasy.
André Rakotondranaivo. - Raha tena maika ny fampandrosoana ny toe-karen'ny Malagasy, dia tsy latsa-danja amin'izany ny asa miandry ireo mpikaroka sy mpanoratra bokim-pianarana amin'izao fotoana izao!
2)- Tokony hogasiana tsotra izao araka ny fanononana efa mahazatra ny olona ireo teny vahiny fampiasa andavanandro : Ohatra:
la table (fr.) = latabatra ;
chaise (fr.) = seza ;
moteur (fr.) = môtera ;
fête (fr.) = fety ;
total (fr.) = tontaly ;
volcan (fr.) = volkano ;
tar (angl.) = tara (godrao) ;
geese (angl.) = gisa ;
cement (angl.) = simenitra ;
cigar (angl.) = sigara ;
slate (angl.) = solaitra ;
carpet (angl.) = karipetra
Géographie = Jeografia;
Philosophie = Filôzôfia;
Géométrie = Jeometria;
Trigonométrie = Trigônômetria
Toetra Ràja. Momba ny fanagasiana ny fampianarana ve nety ho nisy paik'ady tsy nifandraika tamin'ny fiaraha-monina tamin'ny fotoan'androny ?
André Rakotondranaivo. Azo lazaina ho kihon-dalana teo amin'ny fiainam-pirenena malagasy tokoa ny taona 1972, izay nitakian'ny mpianatra ny hanagasiana ny fampianarana. Tsy ny fomba fampianarana amin'ny teny malagasy ihany anefa izany, fa ny fampianarana ny fomban-drazana, ny kolontsaina, ny tenin-dreny, ny lalàna eny amin'ny tribonaly, ny asa aman-draharaha, ny fitaovana, fa leon'ny fandaharam-pianarana ataon'ny frantsay ny olona, mbamin'ny kolontsaina vahiny.
Koa rehefa tafavory ny mpanofana rehetra tao amin'ny "BEP-OTEP", dia nanapa-kevitra fa hamoaka boky fianarana amin'ny teny malagasy, ka izay afaka hanao izany dia amporisihana tokoa. Ny tenako no lohalaharana amin'ny famoahana boky fianarana ho an'ny S.F.F. (Sekoly Fanabeazana Fototra), toy ny "Fianarana manoratra teny malagasy" ; ny "Kajy Fototra" ; ny famakian-teny atao hoe "Malagasy tokana" - ny "Fahalalana tsotsotra" sy ny sisa, izay nankasitrahan'ny Mpampianatra sy ny Ray aman-drenin'ny mpianatra tokoa. Voambolana niarahan'ny mpampianatra mpikambana notsongaina avy tamin'ny Faritany rehetra eto amin'ny Nosy no nampiasaina fa tsy hevitr'olon-tokana.
Nampalahelo fa na dia nanezakezaka aza ny tao amin'ny Ambaratonga voalohany, dia nikatso tao amin'ny Ambaratonga faharoa satria tsy nisy ny boky hampiasaina. Na dia tsy nofoanana aza ny fianarana teny frantsay, dia variana nianatra teny malagasy ny mpampianatra, ka zary toa natao an-tsirambina ny fampianarana ny teny vahiny. Ankoatra izany koa dia lasa Minisitry ny fampianarana ny lehilahy iray nanambady vazaha frantsay, izay namporisika ny vadiny hanafoana io fanagasiana io, ka dia naverina indray ny fampianarana amin'ny teny frantsay. Ny S.F.F. naverina ho E.P.P. (Ecole Primaire Publique). Nomena fanampiana (subvention) ny Sekoly tsy miankina mampianatra amin'ny teny frantsay, ka nifandrombahana tokoa ny hampiana-janaka tamin'ireny!
Ampahany tamin'ny tapatapakahitra nifanaovan'izy mianaka io naroso io ary azontsika atao tsara ny mamaky azy manontolo ao amin'ny Poetawebs, efitra tapatapakahitra, misy lisitra ahitana ny anarana hoe AéRa (André Rakotondranaivo).
45 taona taty aorian'ny hetsika, mbola mitohy ny adihevitra momba ny fanagasiana. Mihodinkodina tsy mahita lalan-kivoahana ny Malagasy. Efa an-taonany maro sahady izao no nanovana ny SFF ho EPP. Tafaverina ve ny tena fiandrianam-pirenena? Nisondrotra ve ny fari-pahaizan'ny mpianatra araka ny hetahetan'ireo namingana ny fanagasiana?
na dia tsy leo
ny eso sy kiana?"
Mety ho nisy tsirambina sy tandrevaka ny fomba nanatanterahana ny fanagasiana. Raha misy finiavana vaovao hamerina ny fiandrianam-pirenena amin'ny alalan'ny tenin-drazana dia tsara raha ifanarahan'ny rehetra izany amin'ny alalan'ny fifampiresahan'ny samy Malagasy.
"Eo amorom-patan'eo, ny fo toro aninkeheo, voavinda ka nisaona... dia hisinda raha mihaona amin-dresaka mafonja, mampitresaka ny fonja."
"Na dia hoe
fa ny andraso
Ka ny RESAKA
in TIAKO - TIAKO FOANA! p126
"Tsy miray hina ny Mpampianatra teny malagasy amin'ny Ambaratonga rehetra hanohy ny fanagasiana ny fampianarana", hoy i André Rakotondranaivo.
Efa voalazan'i Emilson Daniel Andriamalala ny mety ho antony: "Satria ireo lehibebe... tsy nisaina izay hampisondrotra ny mpiray foko aminy, fa ny niray petsapetsa tamin'ny vahiny mpangoron-karena." in Ny fanagasiana, 1974, p. 22.
Mbola ny nofinofiny ihany anefa no nantefany tany amin'ireo avara-pianarana Malagasy manao hoe: "Mifantoka eny amin'ny manam-pahaizana vokatry ny taniny ny mason'ny Malagasy tsivakivolo... Angamba aza tsy ny mason'ny Malagasy ihany, fa ny mason'izao tontolo izao koa." (p. 59)
Mpianatra teny amin'ny anjerimanontolo no loharano nipoiran'ny tantara. Nanao ny ainy tsy ho zavatra izy ireo satria nisy ireo nalefa sesitany, 40 no lavo teo amin'ny lapan'ny tanànan'Antananarivo. Nanana hazon-damosina sy fanamby tokoa izy ireo fa tsy nanaiky ho voarebirebin'ny tolotra vita paika tsy mifanaraka amin'ny toe-panahy maha Malagasy sy ny kolontsain'ny Malagasy.